ရွာထဲက သံယောဇဉ် နှလုံးသားတွေ မန္တလေးမှာ ဆုံကြတဲ့ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာထဲက သံယောဇဉ် နှလုံးသားတွေ မန္တလေးမှာ ဆုံကြတဲ့ပွဲ
ရွာထဲက သံယောဇဉ် နှလုံးသားတွေ မန္တလေးမှာ ဆုံကြတဲ့ပွဲ
Posted by Diamond Key on Jan 15, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 43 comments
မန္တလေးမှာ ဆုံကြတဲ့ပွဲ ရွာထဲက သံယောဇဉ်
ကျွန်တော် ရွာထဲရောက်ကတည်းက ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဗဟုသုတတွေ ဖလှယ်၊ ရင်းနှီးမှုတွေ ဖြစ်နေကြပေမယ့် အပြင်မှာတော့ မတွေ့ဖြစ်ခဲ့သေးပါ။ လူခြင်းသာ မတွေ့ဖူးကြပေမယ့် ရွာထဲမှာတော့ ညီအကို မောင်နှမတွေ ဖြစ်ကာ စာသံယောဇဉ်တွေ၊ ဖုန်းနဲ့တော့ ရင်းနှီးနေကြပါတယ်။
တစ်နေ့က ကိုပေါက် (မန္တလေး) က ရွှေတိုက်စိုး ရန်ကုန်က ရောက်နေတုန်း အားလုံး ဒီနေ့ တွေ့ဖြစ်အောင် ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ စီစဉ်တော့ ကျွန်တော်က မဖြစ်ဖြစ်အောင်လာမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရွာထဲက ညီအကို မောင်နှမတွေ တွေ့ရမှာ ဆိုတော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားမယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကိုပေါက်ကို ဘယ်မှာ ဆုံမလဲ မေးလိုက်တော့ မန္တလေး၊ ကန်တော်ကြီးနားက ရှမ်းကလေးကျွန်းရွာထိပ်နားတဲ့။ အမယ်…ကိုပေါက် ရွှေးမှတော့ နေရာလေးက ဓါတ်ပုံသမား အကြိုက်နေရာလေးဗျ။
ဆုံဖို့ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်မတိုင်မှီ အရောက်သွားပြီး ရွာကလေးဆီ ဝင်တဲ့လမ်းကလေးမှာ လှမ်းငေးနေလိုက်သေးတယ်။
ရွာကလေးထဲဝင်တဲ့ တံတားလေးပေါ်ကနေ ရွာထဲမှာ ပြဖို့ ကိုယ်ပုံကိုကိုယ် ပြန်ရိုက်ခဲ့ရသေးတယ်။
ရွာအဝင် တံတားလေးပေါ်က စိန်သော့
ကိုပေါက်က လာနေပြီဆိုလို့ ရွာရှုခင်းလေး ကျောခိုင်းလိုက်တယ်။
နောက်တော့ ရွှေတိုက်စိုးရယ်၊ ကိုပေါက်ရယ်၊ ညီလေးဖရဲရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ် လေးယောက်ဆုံပြီး အမရပူရ မြို့နယ်ထဲက ရွှေကျက်ယက် မြန်မာဘူဖေး ဒေါ်အေးကြင် ထမင်းဆိုင်ဆီ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာ နော်တို့ ဆြာပေနဲ့ တွေ့မယ်လေ။
ရွာထဲက သံယောဇဉ် နှလုံးသားတွေ ဆုံခဲ့ကြတဲ့ ရွှေကျက်ယက် မြန်မာဘူဖေး ဒေါ်အေးကြင် ထမင်းဆိုင်
အဲဒီနောက်တော့ စကားတွေက ပြောမဆုံးပေါင်၊ တောသုံးထောင်။ စားပွဲပေါ်က စားစရာတွေတောင် တော်တော်နဲ့ မထိနိုင်ကြသေးပေါ့။
စားပြီးတာတောင် ပြောမဝသေးလို့ ကန်တော်ကြီးစောင်းက ကဖေးချိုချိုဆီ ယွန်းခဲ့ကြသေးတယ်။ အဲဒီမှာ ရွာအကြောင်းစာအကြောင်းတွေ ပြောကြ၊ အလှုအတွက် လှုကြနဲ့ အတော်ကြာမှ ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ သြော် ……….. ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရွာထဲက သံယောဇဉ် နှလုံးသားတွေ မန္တလေးမှာ ဆုံကြတဲ့ပွဲလေးပေါ့။
ဗီဇမပျောက်တဲ့ ကော်နက်ရှင်နဲ့ အတော် နပန်းလုံးပြီး တင်လိုက်ရတယ်ဗျာ။
သောကြနေ့လာသောက်မယ် စနေတရက်ဝအောင်သောက်ပြီး တနင်္ဂနွေပြန်မယ်လေ ..။
လေးဖက်တို့ကတော့ သောက်ရမယ်ဆို ဘယ်နှယ် နေချင်းပြန်တောင် သွားဦးမလားမသိဘူးနော်။ သွားရင် ခေါ်ဦးနော် ကပ်မြှောင်လိုက်မလို့….
မန်းလေးကို သွားလည်ချင်ပါသေးတယ် …
ရန်ကုန်က ရွာသူားတွေ စုပြီး သွားနိုင်ရင် ကောင်းမယ်နော် …
မဝေရေ၊ ရောက်အောင်လာခဲ့ ကြပါလား။ ခရီးတိုလေးတစ်ခု အတူသွားကြတာပေါ့။ အားလုံး တူပျော်ပျော် ရွာကလူတွေ အတုနော်
ညည်းတို့ စားရပေမဲ့ သများတို့ငတ်သလိုပဲ ခံစားရပါတယ်ချင့်
Please left some pork curry for me.
Here, Qatar, No pork available.
I will arrive back in May, 2012. Please let me meet my senior villagers at Mandalay, my native town.
Swal Taw Ywet. ခင်ညား..
ကျနော်တို့ မန်းလေးကိုသာ ရောက်အောင်လာခဲ့ပါ
ရေမီးစုံနဲ့မြေကြီးပါတုန်စေရမယ်..
လိုလေသေးမရှိ နန်းစတော့ ပလန်နဲ့ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
It is sure, I will arrive back in middle of May, 2012.
နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုတဲ့ ကိုစိန်သော့၊ကိုရွှေတိုက်စိုး၊လေးပေါက်ရယ်၊ကိုပေတို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေနပ်မှုကြည်နူးမှုတွေနဲ့ ပြည့်ဝခဲ့တဲ့ အိမ်ပြန်လမ်းလေးတစ်နေ့ပါ။
ဟုတ်တယ် …ရွာထဲကလူတွေ စုပြီး မန္တလေးကိုသွားရရင်ကောင်းမယ်နော်
မန္တလေးတဝိုက် အနှံ့ရောက်အောင် လိုက်ပို့ပါမယ် ခင်ဗျာ။ လာဖြစ်အောင် လာကြပါ။
ညီလေးရေ၊ တို့တွေကတော့ အမြဲဆုံလို့ရပါတယ်။ တွေ့ကြအုံးမယ်လေ။
သူခေါ်တယ် လာပါ လာပါ……………………….
မန်းဒလေးကို မန်းဒလေးကို မန်းဒလေးကို မန်းဒလေးကိုလာမယ်။
ထမင်းပွဲကြီးက ရင်ခုန်လိုက်တာ။ အဲ့လိုမျိုး ထမင်းပွဲ မမြင်ရ ကြာလေပြီ၊ မစားရကြာပါပေါ့။ အဲ့ဒါမျိုး စားရလို့ကတော့ ထမင်း သုံးပွဲ ကုန်မယ်ထင်တယ်။ ပဲပုတ်ဆို ချက်လေးပါ မြင်သလားလို့။
မှန်လိုက်လေမှီရေ။ စားချင်လိုက်တာ။ ရှလွှတ်။ ;-)
ကြက်သားဟင်းက ကာလသားချက်လေးထင်တယ်။ မန်းလေးရောက်ရင် သွားစားဖို့ မှတ်ထားလိုက်ပြီ။
စားလို့ကောင်းသလားလို့မမေးနဲ့ အဲဒီအထဲမှာ ပဲရွက်သုတ်ကပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်
ကျနော်ဆို အဲဒီအသုတ်ဘဲအများကြီးစားခဲ့တာ ။
ကျွန်တော် က ရောက်တာနောက်ကျ လို့ ၊ ကိုစိန်သော့ ဘယ်အချိန် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးမှန်း မသိလိုက်ရဘူး ။
ပုံလေးတွေ က သာယာမှု ကို ညွှန်းဆိုနေတယ်နော……
ကိုပေါက်က ဆုံကြဖို့ ရွေးလိုက်တဲ့ နေရာလေးကို သဘောကျလို့ ရိုက်ထားလိုက်တာပါ ကိုပေရေ။
၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ…အခုလို ရွာထဲကညီအကိုမောင်နှတွေ အပြင်မှာတစ်ကယ်ဆုံတွေကြရတာ ပျော်စရာပါ။
ဒီတစ်ပွဲတော့ လွတ်သွားပြီ ကိုပေါက်ရေ…..
နောက်တစ်ပွဲတော့ ရောက်အောင်လာခဲ့ မယ်။
စိန်ဒိုင်းမွန်းရေ “ကိုယ့်ပုံ ကိုယ်ရိုက်ပြတော့ အရိပ်” လို့ စကားပုံ တစ်ခု တိုးရမယ်။
မန္တလေးသား စကား လို့ ကြားဖူးတာ ခုတော့ မန္တလေးသား အစား ဖြစ်နေပါလား။ မနာလို လိုက်တာနော်။
ထူးထူးဆန်းဆန်း မြန်မာဘူဖေးတဲ့။ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ အကောင်းသား။
ပုဂံက မြန်မာဘူဖေးတွေကတော့ မကိုက်လို့ ရိုးရိုးဆိုင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့ အသိတယောက်ကပြောပါတယ်။ထပ်မရောက်သေးလို့ကိုယ်တိုင်မတွေ့ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်က ဆရာစံလမ်းထဲက မြန်မာဘူဖေးကတော့ လပိုင်းပဲခံတယ်။
မန္တလေးသားတွေ သိပ်မဖိတ်ခေါ်နဲ့နော် ။ တကယ်လာမှာ..။
ဟုတ်ပါ့ ဦးဦးပါလေရာ ရေ .. အနော် တော့ . ရှေ့  အပတ် ထဲ ဒိုး ဖြစ်တယ်။ ..ပုန်းနေရင်တော့ ရွာဆူ အောင် လုပ်မယ် ဒါဗြဲ ..
ဦးပါလေရာရေ၊ ပုဂံမှာကော၊ မန္တလေးမှာပါ မြန်မာဘူဖေးဆိုင်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်ဗျ။
ဦးစိန်သော့ကြီးကတော့ သားရေကျအောင်လုပ်နေပြန်ပါပြီ … ဟင်းတွေကလည်း အများကြီး ဟီးဟီး . .. မန်းလေးသားတွေ ပြုစုကောင်းတယ် .. ဟီး …။
စားတဲ့ လူက လေးယောက်တည်းကို ဟင်းတွေက အများကြီးဆိုတော့.. ကုန်မှ ကုန်ပါ့မလားဟင် …ဟီး ..
အဲဒီဆိုင်က ဟင်းပေါချက်ကတော့ဗျာ စားတဲ့သူတောင်လက်မြောက်ရတယ်။
မန္တလေးကအလှမ်းမဝေးပါဘူး htet way ရာ။
ထမင်းစားချိန်လေး အချိန်ခိုးပြီး အင်တာနက်ဆိုင်လာပါတယ် ထမင်းပြန်ဆာအောင်လုပ်နေတယ်
စားသွားပီနော် ဖေကြီးကို ဦးမချတော့ဘူး ကန်တော့ ဆာနေလို့
ဘူဖေး ဆိုင်လေးကဦးပိန်တံတားနဲ့ နီးလားဗျ..
လာဖြစ်ခဲ့လို့များ..အဆင်ပြေရင်တော့ ဦးပိန်တံတားပေါ်လမ်းလျှောက် ပြီးရင်ဘူဖေးထမင်းဆိုင်ဝင်ပြီး အပီဆွဲ..
ဒီဆိုင်လေးက စစ်ကိုင်းမန္တလေး မြို့ပြင်လမ်း၊ (ကမ်းနားလမ်း) ပေါ်မှာပါ။
ဦးပိန်တံတားနဲ့ကတော့ နီးတယ်လည်းပြောလို့ရတယ်၊ နဲနဲလှမ်းတယ်လည်း ပြောလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးပိန်တံတားပေါ်လမ်းလျှောက် ပြီးမန္တလေးဖက်ပြန်ရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးဖက်ဝင်ပြီး အပီဆွဲလို့ ရပါတယ်။
ကိုစိန်သော့ရေ ဒီနေရာဒီဆိုင်လေးကို ရွေးတဲ့သူက ညီလေးရွှေတိုက်စိုးပါ။
ကိုစိန်သော့ ရှမ်းလေးကျွန်းရိုက်ပြတော့ ကျနော်ပိုးထပြီး ဒီနေ့မနက်လမ်းလျှောက်ထွက်တော့
ကိုစိန်သော့ရိုက်ခဲ့တဲ့တံတားဘေးက ချောင်းလေးထဲမှာ ပင်စင်ပေးထားတဲ့ လှေကလေးတောင်တွေ့လို့
တံတားအဆုံးက တဲထဲမှာထိုင်နေတာ ဖရဲသီးဘဲ ကိုစိန်သော့ရေ။
ဟုတ်တယ် ကိုပေါက်ရေ။ နေရာလေက လှတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က အဲဒီနေက Camera မပါလို့ ph နဲ့ပဲ ရိုက်လာတာလေး တင်လိုက်တာ။ ရွာအတွင်းထဲပါ သွားရိုက်ရင် လှမယ်နော်။
ရွှေတိုက်စိုးရေ၊ ဆိုင်လေးနဲ့ နေရာလေးကို ကြိုက်တယ်။ အားလုံး တစ်ချိန် ထပ်ဆုံကြအုံးစို့။